“Masaajidkeena waxaa laga ogolyahay dhallinta timaha weyn iyo kuwa surwaalada jiidaya” | Baahin Media
“Masaajidkeena waxaa laga ogolyahay dhallinta timaha weyn iyo kuwa surwaalada jiidaya”
Jul 9, 2019 - jawaab
Barnaamij ku saabsan dhaqan celinta dhallinta Soomaalida ayaa ka socda magaalada Toronto ee dalka Canada.
Barnaamijkan oo ay iska kaashanayaan waalidiin isxilqaamay iyo maamulka masaajidka Khalid Bin Waliid ayaa wuxuu sababay in dhallinyaro badan ay badalaan hab dhaqankoodii hore.
Barnaamijkan ayaa saamayn ku yeeshay boqolaal dhallinyaro ah, wuxuuna sababay in dhalinyaro badan ay si iskood ah u imaadan masaajidka.
Abuukar Maxamed waa maamulaha masaajidka Khalid Bin Walid, waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata ay tahay sidii lagu barbarian lahaa diintooda iyo dhaqankooda.
“Muddo dheer ayaan ka fakaraynay arrinkan dhalinyarada sidii wax looga qaban lahaa, balse maanta waxaan maraynaa meeshii ugu fiicnayd, waxaa jira dhalinyaro badan oo iskood masaajidka isugu soo xiray, waan soo dhaweynay waxaana ku dhiiragelinnay inay masaajidka yimaadan, qaar timaha weyn kuwa surwaalada jiidaya waan soo dhaweynay kalama aanan hadlin arrimahaas” Ayuu yiri Abuukar.
“Waxaan masaajidka la keena dhalinyaro aad u da’yar oo maydadkooda lagu dhaqay halkaan taasi oo niyad jab weyn nagu abuurtay, marka waalidiinta waxaan u sheegnaa inay baraarugaan ayna masaajidka ku soo xirmaan.” Ayuu ku daray.
Dhaqan celinta dhalintaan ayaa waxa qayb weyn ka ah waalidiin isxilqaamay oo iyaga dhaqaalo iska aruuriyo. Haddaba muxuu yahay hadafka waalidiintaan?
Hadafkeena waa inaan ka dhisnaa bulsho isku filan oo dhisan, dhalinyarada ay noqdaan kuwa hoggaamiyo, qodobada uu ku taaganyahay waalidka isxilqaamay ayaa ah in qof kasta oo xubin ka ah uu bixiyo lacag gaaraysa 20 doolar, inaan isku soo uruurinno dadka aqoonyahannada ah si ay uga qayb qaatan arrinkaan iyo in waalid walba uu kuwa kale ka dhaadhiciyo barnaamikan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen. “Cali Axmed Cabdulle oo ah gudoomiyaha waalidiinta.
Dhalinyaradan ayaa qaata cashira kala duwan oo loogu talo galay in wacyigelin loogu abuuro.
Cashiradaan miyey yihiin kuwa kaliye la xiriira diinta ama dhaqanka?
“Cashirada aan siinaynayno dhalinyaradaan maahan kaliye kuwa wacyiga diinta oo kaliye balse waxaa barbar socda inaan ugu yeerno aqoonyahanno bara arrimaha kale ee la dhaqanka bulshada.” Ayuu yiri Abuukar.